चीनमा यस्तो चट्टान फेला पर्यो जसले अण्डा पार्छ ! संसार अचम्मित… – Latest News, Video, Entertainment,Health
चीनमा यस्तो चट्टान फेला पर्यो जसले अण्डा पार्छ ! संसार अचम्मित…
August 3, 2019 August 11, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
संसारमा विचित्रका ठाउँ छन् । विचित्रका घटनाहरु पनि घटिरहेका हुन्छन् । केही घटनाहरुले मानिसलाई निकै अच्चमित र आश्चर्यचकित बनाउँछन् ।
छिमेकी मुलुक चीनमा एउटा अचम्मको चट्टान छ, जसले अण्डा पार्छ भन्दा जो कोही लाई पत्याउन मुस्किल पर्छ । दक्षिण पश्चिमी प्रान्त गिझोउमा रहेको चट्टानले हरेक ३० वर्षमा अण्डा पार्ने गरेको बताइन्छ ।
← Useful tips for Lose your Weight Without Dieting
काठमाडौंको पानीमा भेटियो मानिस र जनावरको दिसा →
१६ लाखमा अंग परिवर्तन गरेर महिला ।
August 11, 2019 August 11, 2019 Info-Kantipur 0
सनी लियोनीका यी हुन् २३ गोप्य कुरा
September 8, 2019 September 8, 2019 Info-Kantipur 0